Amal Express, Reliable online money transfer. - Amal Sports
Amal SportsAmal Ottawa2016-06-29T12:06:03+00:00
Xawaalada Amal Ottawa, adeegyada badan ee ay bulshada u hayso kuma koobna dirista, bixinta iyo sarifka lacagaha oo ay caan ku tahay. Balse waxay door hormuuda ka qaadataa dhiirigelinta iyo wacyi gelinta dhallinyarada iyadoo aaminsan inay bulshada dib ugu celiso qayb ka mida faaidada ay ganacsigeeda ka hesho.
Tusaale ahaan lagasoo bilaabo sanadkii 2004 ilaa manta 2016 waxay Amal Ottawa wadday, welina waddaa, qabashada koobab ciyaareed oo ay kutartamaan dhallinyarada iyo dhallinyarada cuslaatay. ee noth America Kuwaasoo ay kooxda ku ciyaarta magaca Amal Ottawa guulo la taaban karo kasoo hoysay.
Sawiradani waxay qayb ka yihiin koobabkii Amal Ottawa qabatay 2004 ilaa 2016 oo looga gollahaa in da’yarta reer Ottawa looga mashquuliyo dhaqamada qalaad iyo kuwa xunxun oo madadaalo la’aantu ku xambaari karto. Waxana halka ugusoo bandhignay si bulshada loo dareensiiyo kaalinta Amal Ottawa ugu jirto iyo sida ay uga go’an tahay naf iyo maal la qaybsiga qurbajoogta somaliyeed ee Noth america ku nool. Islamarkaana waxan xawaaladaha iyo ganacsatada somaliyeed ee halkan nagula nool ku baraarujinaynaa inay nagala soo qayb galaan dadaalka aan ugu jirno daryeelka ubadkeena iyo bulshadeenaba.